गायक सुनिल गिरीको ‘मुग्लान’ बोलको गीत सार्वजनिक, काे हुन सुनिल गिरी ? (भिडियाे सहित) - Lekhapadhi : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
गायक सुनिल गिरीको ‘मुग्लान’ बोलको गीत सार्वजनिक, काे हुन सुनिल गिरी ? (भिडियाे सहित)
लेखक : लेखापढी १५ भाद्र २०७७, सोमबार १३:५८ मा प्रकाशित
कालो धुँवा मुग्लानैमा रेलको सरर, म त हिँडे लाहुरतिर नरोउ धरर…..
गायक सुनिल गिरीको पिरती एल्बममा समावेश ‘मुग्लान’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । परदेशीका पीडा समेटेर गायक सुनिल गिरीले निषेधाज्ञा बीचमा नयाँ सांगीतिक कोसेली ‘मुग्लान’ पस्किएका छन् ।
गायक सुनिल कै शब्द, संगीत, निर्माण तथा निर्देशन रहेको गीतमा मेलिना मैनालीको स्वर रहेको छ भने गीतमा गायक सुनिल र गायिका मेलिना कै अभिनय रहेको छ । म्युजिक भिडियोलाई विवेक विकले छायांकन गरेका हुन् भने सम्पादन पनि गरेका छन् । यो गीत गायक सुनिलले आफ्नै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
कालो धुँवा मुग्लानैमा रेलको सरर
म त हिँडे लाहुर तिर नरोउ धरर
सम्झी सम्झी निष्ठुरीलाई आँसु बरर
छाडी जाने मायालाई भन्नू के छ र
बिचल्ली पार्यौ, एक्लै छाड्यौ कलिलो बैंसमा
भिजेको आँखा देखेनौ प्यारा, के छ र पैसामा
फर्केर आउँछु, मै खुशी ल्याउँछु, पसिना बेचेर
भत्किन नदेउ सपना हाम्रो, राखे है साँचेर
लौन माया कुर्दा कुर्दै जाला जिन्दगी
हैन माया फर्की आउँछु म त केइ गरि
चर्केको छाती, दुखमै माथि दोधारमा नपार
सिन्दुर हाली जाउँ न माया, हुन्न चै नभन
विश्वास तिम्रो म लुट्ने छैन, सानो मन नगर
सिन्दुर किन्ने पैसा नि प्रिय मसँग काँ छर
को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउने
को होला त्यो
नचिने’नि मसँग अलि लजाउने
गोधूलि त्यो साँझैमा
लोकप्रिय गीत ‘को होला त्यो’ बाट सांगितिक यात्रा सुरु गरेका गायक गिरीले पछिल्लो समय मौलिक परिवेशको गीत ल्याउँदै आइरहेका छन् ।
यात्राको क्रममा भेटिएकी गाउँले साईंलीलाई आफ्नो सहयात्री बनाउन फकाउँदै गरेको यात्रीको कथालाई कलात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको भिडियोले दर्शकहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया समेत पाइरहेको छन ।
सुनील गिरी नेपालको तनहुँ जिल्लामा जन्मिएका हुन् । आफ्नो विद्यालय जीवन सकेर उनी संगीत शिक्षाको लागि पोखरा पुगे । पोखरामा ३ महिने संगीत सिकी सकेपछी थप पढाईका लागि उनी काठमान्डू पुगे । काठमाडौको रेन्बो इन्टरनेशनल कलेज डल्लु बाट अङ्ग्रेजी विषय बाट उनले स्नातक तह उतिर्ण गरेका उनिले आफ्नो पहिलो गीत २०१२ मा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तनहुँ देखि काठमाडौं
तनहुँको स्याम्घा गाविस शेखाटार गाउँमा जन्मिएका हुन् सुनिल । लोक भाका गुञ्जिरहने ठाउँ । स्कुले बेलादेखि नै उनीमा भने लोक पप संगीतको नशा चढ्दै थियो । संगीतको रस बुझेका साथीभाइ कोही नहुँदा आफैंभित्र गुनगुनाएर बस्थे ।
Sunil Giri (4)उनी प्रायः नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, नवीन के भट्टराई र सुगम पोखरेलको गीत सुन्थे । तर, छाप चाहिँ कन्दरा ब्यान्ड र मंगोलियन हार्टका राजु लामाका लोक पप भाकाहरूले पारेका थिए ।
लोक गीतको भूमिमा आफ्नो लोक पप संगीतको चाहना त्यत्तिकै गुम्सिएर मर्ला कि भन्ने चिन्ता थियो उनलाई । ‘त्यसलाई जोगाएर फलाउन-फुलाउन कति बेला गाउँ छोडूँ भन्ने सुरमा थिएँ,’ सपनाको उडानबारे सुनाए ।
नभन्दै २०६१ मा एसएलसी दिएको एक वर्षपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी हान्निए ।
सारेगम कला केन्द्रमा अशोक पौडेलसँग संगीत सिक्न थाले । पछि गान्धर्व इन्स्टिच्यूटमा चन्दन श्रेष्ठसँग ६ वर्ष शास्त्रीय संगीत सिके । रागहरूको ज्ञानले स्वर तिखार्दै आफूमा संगीतको जग गहिरो गरी बसाए । तर, उनको रुचि थियो लोक पप विधामा । आफूले सिकेको ज्ञानलाई लोक पपमै उपयोग गर्ने तयारी गर्दै थिए ।
कला क्षेत्रप्रति उनको झुकाव घरपरिवारलाई मञ्जुर थिएन । सामान्यतया हरेक नेपाली घरको रोग ! यसैले आफ्नो सपनाको जलप चम्काउँदै घरपरिवारको पनि चित्त बुझाउन औपचारिक अध्ययन पनि बढाउँदै थिए । अंग्रेजी विषय लिएर स्नातक गरे ।
बुवाको चाहना छोरालाई इन्डियन आर्मी बनाउनु थियो । बुवा र चार जना काकाहरु इन्डियन आर्मीमै थिए । छोरा सुनिल भने राजधानीमा राग र सुरको गोला-बारुदमा कायल भइरहेका । पढाइलाई राम्ररी सम्हाल्दै परिवारलाई थाहै नदिई संगीतको महासागरमा पौडिरहेका थिए । त्यस क्रममा ६/७ वर्षमा गाउन सक्ने क्षमता र कस्तो लय बनाउने भनेर क्षमता हासिल गरे ।
लामो अध्ययन र मिहिनेतपछि ‘को होला त्यो’ गीत नेपाली संगीतलाई दिए । मिहिनेत र लगनले काम गर्‍यो । गीतले श्रोताहरूबीच जादु देखायो ।
उनी आफैं गीत लेख्थे । गीत कम्पोज पनि गर्थे । आफ्नै शब्द/संगीतमध्येबाट पनि अलि राम्रो छानेर त्यो गीत निकालेका थिए ।
‘सिकेरै गरुँ भनेर आफ्नो काममा विश्वास भएपछि मात्र गीत बनाएको थिएँ । हतारमा कहिल्यै हिँडिन,’ आफ्नो संगीत साधनाबारे सुनिलले बताए ।
गीतको म्युजिक भिडियो पनि बन्यो । मोडल पल शाहले सोही गीतबाट ‘नोटिस’ हुने गरी मोडलिङमा डेब्यू गरे । पलको जोडी थिइन् प्रकृति श्रेष्ठ । भिडियोभित्र लिप्सिङमा गायक आफैं पनि देखिएका थिए । पल र प्रकृति त्यही गीतको भिडियोबाट अन स्क्रिन जोडीका रुपमा रुचाइएर अरु म्युजिक भिडियोमा पनि चर्चित भए । तर, यी गायक भने नाम र अनुहारकै संकटबीच अझै संघर्षमै छन् ।
नाम :- सुनिल गिरी
जन्म :- जुलाई १६, १९८८ (उमेर ३२)
जिल्ला :- तनहुँ, नेपाल
किसिम:- पप, लोक पप
पेशा :- गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता
सक्रिय वर्ष :- 2012 देखि
हाल सम्मका सुनील गिरीका चर्चित गीतहरू:-
वर्ष गीत र मोडेलहरु :-
2012 को होला त्यो पल शाह , प्रकृति श्रेष्ठ
2014 देउराली भन्ज्याङ पल शाह , रीमा बिश्वकर्मा
2015 हामी छौंनि आमा
2015 को होला त्यो2(तिमि आउछौंकी) पॉल शाह, करुण श्रेष्ठ
2016 तिमी आयौं सरोज दाहाल, कृष्णा थापा
2016 सानै छदा संगम, श्रेया
2016 आँखै त राम्रो Parshu, Kusum
2016 जिवन यो रहे सम्म
2016 मिल्दैन र आर्यन सिगडेल , नम्रता श्रेष्ठ गीत: जगदीश टिमिलिना
2017 देउराली भन्ज्याङ २ (सुनकै चुरा) पल शाह , क्रिस्टिन थापा
2017 मेरो नेपाल सुनील गिरी
2017 घरवाली Bhimphedi Guys, Arushi Magar
2017 दशैं आयो सुनील गिरी
2017 रातको सन्नाटामा सरोज बहादुर शाह (टाइगर), प्रमोद कार्की र मित्रहरू
2017 कस्तो यो मन सुनील गिरी , श्रेया शर्मा
2017 को होला त्यो3(टोलाउँदै होला) पल शाह, क्रिस्टिना थापा
2018 बाजेले भन्थे निराजन प्रधान, मनिष श्रेष्ठ
2018 मेरो रास्ट्रलाई गीत: सौरव दाहाल, कल्पना खरेल
2018 कस्तो यो मन2(परदेशी) सुनील गिरी , श्रेया शर्मा
2019सोल्टिनी पुष्प खड्का, अंजली अधिकारी
मिन बहादुर मण्डेल
सुदुरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला
छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर- ७
टोल :- घट्टे मजखोरी (सुन्दरपुर बस्ती)
इमेल :- mandelm414@gmail.com
काेराेनाभाइरस, मुख्य समाचार, श्वास्थ्य